Akanyaradzwa Panguva Chaiyo
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Zulu
Yakataurwa naMiklós Aleksza
Ndakaedza kusimudza musoro kuti ndigone kufema asi ndakatadza. Ndakanga ndakarara mumvura ndakatarisa pasi. Ndakavhunduka, saka ndakaedza kuti ndipinduruke asi zvakaramba. Mvura yakatanga kuzara mumapapu. Zvakaitika musi uyu mugore ra1991 zvakabva zvachinja upenyu hwangu zvachose.
NDAKABEREKERWA kuHungary, muguta reSzerencs ndikakurira munzvimbo inonzi Tiszaladány. Muna June wegore ra1991, ndakaenda neshamwari dzangu kuRwizi rwaTisza kunotuhwina panzvimbo yatakanga tisati tamboenda. Ndakafunga kuti mvura yacho yaiva yakadzika ndichibva ndasvetukiramo. Ndakazvinyengera. Ndakatyoka mutsipa uye ndakakuvara musana. Shamwari yangu yakaona kuti ndakanga ndisingachagoni kumuka ichibva yandisimudza ikandibuditsa mumvura.
Ndakanyatsoona kuti zvinhu zvakanga zvisina kumira zvakanaka. Veamburenzi vakafonerwa, herikoputa ichibva yauya kuzonditora ndokundiendesa kuchipatara uye ndakabva ndanovhiyiwa musana. Pave paya ndakazoendeswa kuguta guru reBudapest kwandaiitiswa maekisesaizi. Ndakaita mwedzi mitatu ndakarara nemanhede. Ndaigona kufambisa musoro, asi ndaisagona kufambisa muviri kubvira mumapendekete zvichidzika. Pazera remakore 20 ndakanga ndisisina chandaikwanisa kuzviitira. Ndakakungura kufa.
Pandakazobudiswa kuti ndiende kumba, vabereki vangu vakabva vadzidziswa kuti vonditarisira sei. Asi raisava basa riri nyore kunditarisira, uye pashure pegore ndakatanga kurwara nechirwere chokunyanya kusuwa (depression). Ndakabva ndatsvagirwa vanachipangamazano panyaya idzi uye vakandibatsira kuti ndichinje maonero andaiita urema hwangu.
Ndakatangawo kufungisisa nezvoupenyu. Hune chinangwa here? Nei dambudziko iri rakaitika kwandiri? Ndakaverenga magazini nemabhuku ndichitsvaga mhinduro. Ndakaedzawo kuverenga Bhaibheri asi ndakatadza kurinzwisisa saka handina kuzoribata zvakare. Ndakataurawo nomupristi asi zvaaitaura hazvina kundigutsa.
Saka muna 1994, mumwe murume nomudzimai wake vari Zvapupu zvaJehovha vakashanyira baba vangu uye baba vakavakumbira kuti vambotaura neni. Vakatsanangura chinangwa chaMwari chokuita kuti nyika ive paradhiso obvisa urwere uye kutambura. Zvainakidza chaizvo asi ndaisava nechokwadi nazvo. Kunyange zvakadaro, ndakabvuma mabhuku maviri avakandipa. Pandakanga ndaaverenga, Zvapupu zvacho zvakati zvaida kudzidza Bhaibheri neni, uye ndakabvuma. Vakandikurudzirawo kunyengetera.
Ndakasvika pakutenda kuti zvechokwadi Mwari ane hanya neni
Patakaramba tichidzidza, ndakapindurwa mibvunzo yakawanda yandaiva nayo vachishandisa Bhaibheri. Ndakasvikawo pakutenda kuti zvechokwadi Mwari ane hanya neni. Musi wa13 September 1997, pashure pokudzidza Bhaibheri kwemakore maviri, ndakazobhabhatidzwa kumba kwedu mutabhu yokugezera. Nderimwe remazuva andisingakanganwi muupenyu hwangu.
Muna 2007, ndakatamira kuBudapest ndichibva ndanogara zvachose mumusha wevakaremara. Izvi zvakandipa mikana yokuudza vamwe zvinhu zvinoshamisa zviri muBhaibheri zvandainge ndadzidza. Kana mamiriro okunze akanaka, ndinokwanisa kutobuda kunotaura nevanhu, nemhaka yokuti ndine wiricheya yemagetsi yandinofambisa ndichishandisa chirebvu changu.
Imwe mhuri yomuungano yedu yakandibatsira nemari zvokuti ndakakwanisawo kutenga laptop yokuti ndikafambisa musoro inoziva zvokuita. Vaparidzi vomuungano medu pavanoenda kunoparidza, kana vakashaya munhu pamba ini ndinozoshandisa laptop yangu kumufonera kana kumunyorera tsamba. Kubatsira vamwe seizvi kwaita kuti matauriro angu ave nani uye kuti ndisangoramba ndichifunga nezvourema hwangu.
Kuudza vamwe chokwadi cheBhaibheri ndichishandisa laptop inoti ndikafambisa musoro inoziva zvokuita
Ndava kutokwanisawo kupinda misangano yechiKristu. Imba yedu yoUmambo iri panhurikidzwa saka pandinosvika hama dzinondisimudza ndiri muwiricheya kuti ndipinde mukati. Pamisangano, vateereri pavanokumbirwa kuti vapindure, ini kana ndichida kupindura hama inenge iri padivi pangu inosimudza ruoko. Inobva yandibatira Bhaibheri kana kuti bhuku rinenge richidzidzwa ini pandinenge ndichipindura.
Ndinogara ndichingorwadziwa zvokuti nguva zhinji handikwanisi kuita zvandinenge ndichida. Saka dzimwe nguva ndinombonzwa ndakaora mwoyo. Asi ukama hwandiinahwo naJehovha Mwari hunondinyaradza nokuti ndinoziva kuti anoteerera pandinomuudza zvinondinetsa. Ndinosimbiswawo nokuverenga Bhaibheri zuva nezuva uye nehama nehanzvadzi dzangu dzandinonamata nadzo. Kunditsigira kwavanoita uye minyengetero yavo zvinondibatsira kuti ndisaramba ndichinyanya kunetseka.
Jehovha akanyatsouya panguva chaiyo yandaida kunyaradzwa. Akandipawo tariro yokuzova noutano hwakanaka munyika itsva. Saka ndinoda chaizvo kuzoona nguva yandichagona ‘kufamba, kusvetuka ndichimurumbidza’ nemhaka yomutsa uye rudo rwake runoshamisa.—Mabasa 3:6-9.
Bhaibheri rinogona kukubatsira.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndakanyaradzwa Panguva Chaiyo